🥇 ▷ La kulan dukaanka 'Xiaomi Mi Store' ee Chile ✅
La kulan dukaanka ‘Xiaomi Mi Store’ ee Chile
Maanta waxaan helnay mudnaan gaar ah oo ah inaan ogaanno waxa noqon doona kii ugu horreeyay ee Xiaomi Mi Store ee Chile ka hor furitaankiisa rasmiga ah oo la qaban doono Sabtida 27-da 10: 00hrs.
Markii hore waxaa la isla dhex marayay in lagu rakibi doono Plaza Vespucio Mall, iyo sidoo kale Suuqa Costanera Center. Si kastaba ha noqotee, sheyga gebi ahaanba wuu ka duwanaa, maadaama uu ku yaal gudaha xarunta dukaanka ee ‘Apumanque’, oo ku taal dabaqa labaad.
Bakhaarka ayaa leh in ka badan 106 alaabood oo ka yimid cilmiga deegaanka Xiaomi, sida kamaradaha amniga, kumbuyuutarrada, mootada korantada, baaskiillada, qalabka nadiifinta robotic, mashiinka mashiinka, mashiinnada laser, qaboojiyaha, makiinada bariiska, boorsooyinka dhabarka, nidaamyada guryaha korontada, kuwa ku hadla Bluetooth, baytariyada dibedda , laambada, heerkulka dareeraha huurka, saacadaha smart iyo baararka, iyo sida muuqata casriga.
“Xiaomi waxay si rasmi ah u gashay Chile kaliya shan bilood ka hor waxayna durba heshay dhul badan. Markan waxaan bilaabeynaa barnaamijyo casri ah oo casri ah oo dhameystiran si aan u buuxino baahiyaha adeegsadayaasha kaladuwan ee Chile. Alaabadan qaaska ah iyo furitaanka bakhaarkeena cusub, waxaan sugeynaa safarka xiisaha leh ee nagu sugaya dalka, ”Liu Di, oo ah Maamulaha Iibka Xiaomi ee Latin America.
Kooxda weyn ee Aasiya ee Xiaomi waxay nagu martiqaadeysaa inaan ka soo qeybgalno furitaanka dhici doona Sabtiga, Abriil 27 laga bilaabo 10: 00 saac, maadaama loo dabaaldegayo furitaanka Miiskan cusub ee Mi Store, alaabada oo dhan waxay la noqon doonaan qiimo dhimisyo aan la seegi karin.
Miyaad dooneysaa inaad horay u sii aragto dukaanka cusub ee Mi Store?
Hagaag, waxaan kaaga tageynaa fiidiyowgan aan sameynay halka aan ku tusinay sida caadiga ah dhamaan badeecadan la iibin doono Sabtiga, Abriil 27, iyo sidoo kale inaad ogtahay muuqaalka kore ee dukaanka Xiaomi Mi Store.
Xusuusnow furitaanku waa Sabtigaan Abriil 27 saacaddu markay tahay 10: 00hrs ee xarunta laga dukaameysto ee Apumanque (dabaqa labaad), oo ku yaal bartamaha magaalada Las Condes, tallaabooyinka laga soo qaadayo khadka metro Manquehue 1.
Is arag danbo!